Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo Tartan Koob u Qabtay Kooxaha Kubadda Cagta Berbera - Haldoornews
Berbera (Haldoornews )- Guddoomiyaha KULMIYE, ahna murrashaxa jagada Madaxweynaha xisbigaasi Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa tartan koob ku badda cagta ah u qabtay kooxo ka mid ah kuwa dhallinyarada ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta Gobolka Saaxil.
Tartankan oo ujeeddada laga leeyahay tahay is-dhexgalka dhallinyarada, kaas oo laba kooxood koobkaasi loogu qabtay garoonka Bursade ay kala qaybgaleen masuuliyiinta ciyaaraha iyo hay’adaha dawladda qaarkood ee Gobolka.
Isu-duwaha Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan iyo guddoomiyaha kooxaha heerka labaad ee magaalada Berbera, oo si isku mid ah uga warramay ahmiyadda tartankani leeyahay, iyagoo si wayn ugu mahadceliyey Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi booqashada uu ugu tagay iyo maalgalinta tartankaasi.
Sidoo kale, Maayeere-ku-xigeenka dekedda Berbera Cumar Abokor Jaamac, ayaa isna ku bogaadiyey murrashaxa madaxweynaha KULMIYE aragtidiisa oo uu ku dhiirrigelinayo dhallinyarada ku hawlahan ciyaaraha, waxaannu u hogo-tusaaleeyey da’yarta dalka, gaar ahaan reer Berbera inay abaalka u hayaan.
Guddoomiyaha KULMIYE, ahna murrashaxa xisbigaasi Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka warramay faa’iidada ay ciyaaruhu u leeyihiin dhallinyarada iyo in ay ka badbaadaan balwadaha, isla markaana ay horumariyaan xirfadahooda ciyaareed, isagoo dhallinyaradana u rajeeyey mustaqbal wanaagsan.
Isagoo arrintaa ka hadlayeyna waxa uu yidhi, “Ciyaartoygu waxay ka mid yihiin dadka ugu cimriga dheer, ugu caafimaadka iyo caqliga badan, ciyaartu saddexdaas ayey kulmisaa, jidhkii caafimaad qaba ayuu caqliga wanaagsanina ku jiraa, markaa qofka ciyaartoyga ah ee ka nabad-gala balwadaha qaadka, sigaarka iyo gidaar fadhiga, waxa hubaal ah inuu qofka kale ka caafimaad badanayo, caqligiisa iyo maskaxdiisuna ka firfircoonaanayso.”
Waxa kaloo uu ciyaartoyga ku dardaaray sii wadida xirfadooda ciyaareed iyo sidii ay ka qaybqaadan lahaayeen inay fadhiga ka soo kiciyaan dhallinyarada balwadaha ku mashquulay, “Aad baanan idiinku hambalyeynayaa dhallinyaradiina nasiibka ku yeelatay inay ka baydhaan fadhiga ee ciyaartoyga noqday, waxaanan idinku boorrinayaa inaad sii wadaan ciyaarta, in badan oo kalena ka soo kicisaan fadhiga iyo meelaha ay ku khasaarinayaan waqtigooda, waxaan idiin rajaynayaa guul iyo caafimaad iyo noloshiinan bilowga ah oo ilaa inta Ilaahay nafta idiin daayo aad barwaaqo iyo badhaadhe ku waartaan,” ayuu yidhi Md. Muuse Biixi Cabdi.
Doorashada USA: Trump oo sheegay in Islaamka uu Necebyahay Maraykanka